မောငျ(စှယျစုံကမျြး): အင်တာနက်လိုင်းဆွဲအားကို 200% ထိမြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ - Internet Cyclone 2.19 + Full Cracked
အင်တာနက်လိုင်းဆွဲအားကို 200% ထိမြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ - Internet Cyclone 2.19 + Full Cracked
ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့တင်ဘဲ အတော်လေးကို လန်းနေပြီဗျာ။ ပထမတစ်ကြိမ်တင်ပေးတုန်းကလည်း လူကြိုက် အတော်လေးများပါတယ်။ အခုလည်း Version အသစ်ထွက်လာလို့ ထပ်တင်ပေးလိုက်တာပါ အင်တာနက် လိုင်းဆွဲအားကို 200% လောက်ကို Speed Up လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မှာပါ။ Window XP , Vista , Window7, 8 အားလုံးမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အသုံးပြုပုံ ကလည်းလွယ်ပါတယ်။ မိမိအသုံးပြု နေ တဲ့ Type ကိုရွေးခြယ်ပေးပြီး Optimize ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီး ရင် Restart ချပြီး ပြန်တက်လာတာနဲ့ အင်တာနက် လိုင်းဆွဲအားပိုမြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ရရခြင်းစမ်းသပ်ပြီးအသုံးပြုနေတုန်းပါဘဲ။ အမြဲတမ်း အသုံးပြုနိုင်အောင် Keygen ကိုပါထည့်ပေးလိုက်ပါ တယ်ဗျာ။ အသေးစိတ် ကိုတော့ အောက်မှာ မူရင်းအတိုင်း ဘဲလေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Internet Cyclone isapowerful, easy-to-use, Internet Optimizer designed to automatically optimize your Windows settings which will boost your Internet connection up to 200%.
* Improved acceleration settings
1. Run the setup, install the program
2. Enjoy full version!
Author Pyae Phyo (MMiTD) at 4:28:00 PM